Melomania Touch, ọmarịcha ekweisi si Cambridge Audio | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 01/01/2021 18:00 | Emelitere ka 23/12/2020 00:28 | General, Nyocha
N'oge ndị ọzọ, anyị enyochala ngwaahịa sitere na Cambridge Audio, ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama dị na United Kingdom ma ama nke ọma maka ogo ngwaahịa ya. Nke a na oge anyị na-aga na a na nso nso ulo oru ngwaahịa na anyị achọghị uche, na Melomania Aka.
Ezi ekweisi na ezi ikuku (TWS) kachasị ọhụrụ site na Cambridge Audio abanyewo n'ahịa ma anyị anwalela ha. Anyị na-agwa gị nyocha miri emi anyị nwere banyere Cambridge Audio Melomania Touch ọhụrụ ya na atụmatụ ya niile. Obi abụọ adịghị ya, ụlọ ọrụ Britain emeghachila ezigbo ọrụ dị mma.
1 Design: Obi ike na ịdị mma
2 Nka na ụzụ atụmatụ: Hi-Fi centric
3 Qualitydị ọdịyo: Nyocha anyị
4 Ngwa Melomania, uru agbakwunyere
5 Njikwa obodo na ahụmịhe onye ọrụ
Design: Obi ike na ịdị mma
You nwere ike ịmasị ha karịa ma ọ bụ na ị masịrị ha karịa, mana ị maraworị na na nyocha m, m chọrọ ịja ụdị ndị na-ewepụ onwe ha site na-agwụ ike ma ọ bụ ọkọlọtọ ma họrọ maka ime ihe ike ma ọ bụ ụdị dị iche. Nke ahụ bụ ikpe na Melomania Touch, ekweisi ọdịyo ọhụrụ Cambridge.
Ndi ama mmọ? Nwere ike ịzụta ha na ọnụahịa kacha mma na EGO A.
Ọfọn ụlọ ọrụ Britain ọ na-azọrọ na e nyochara gburugburu 3000 ntị dị iche iche na pụta ìhè a na-peculiar na oge ufodu imewe. N’èzí anyị hụrụ plastik na-egbu maramara nke dị ezigbo mma, ihe mkpuchi roba na pad ya.
Onwe soy nke ndị nwere nsogbu na ntị-ntị n'ihi na m na-ahapụ ụdị niile. Nke a anaghị eme m na Melomania Touch, ha nwere "fin" nke silicone na-eme ka ekweisi ghara ịkwaga ma dabara adaba maka ụdị mmemme niile. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke pad ndị etinye na ngwaahịa ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịghara imeghari ha na mmasị gị.
Akụkụ Ihe nkwụ ụgwọ: 30 x 72 x 44mm
Akụkụ Igweisi: Omimi 23 x Elu (ntị ntị na-enweghị nko) 24 mm
Ibu ibu Ileba: gram 55,6
Ibu ibu Igweisi: 5,9 grams ọ bụla
Ọ na-emetụ aka ikwu okwu banyere mkpuchi. Anyị na-achọta ikpe nkwụcha ụgwọ kachasị mma, nke ejiri akpụkpọ anụ mee maka mpụga, ọ nwere akara ngosi batrị ise na ọdụ USB-C na azụ. The igbe nwere oval udi na kọmpat size na ala ibufe, ọ dị ka ihe ịga nke ọma na eziokwu bụ na ọ na-egosipụta àgwà.
N'ikpeazụ, rịba ama na anyị nwere ike ịzụta ekweisi na ọcha na oji, dabere na mmasị na mmasị anyị.
Nka na ụzụ atụmatụ: Hi-Fi centric
Ka anyị kwuo ọnụ ọgụgụ ma bido site na ya 32-bit dual-core processor and single-core audio subsystem. Qualcomm QCC3020 Kalimba 120MHz DSP, n'ụzọ a na site na Bluetooth 5.0 Klas 2 anyị na-enweta ike nnyefe ọkụ dị elu, ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe metụtara ihe a niile kodeks: aptX ™, AAC na SBC nwere profaịlụ A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Ugbu a, anyị na-agakwuru ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị obere okwu ahụ n'ime ekweisi na-agbanwe nhazi dị ukwuu n'ime ụda dị mma. Anyị nwere sistemụ dị ike na diaphragm na 7 mm graphene mkwado, nsonaazụ ya bụ data ndị a:
Ugboro: 20 Hz - 20 kHz
Mgbanwe nke Harmonic: <0,04% na 1 kHz 1 mW
Na ọkwa teknụzụ, anyị ga-ekwukwa igwe okwu, anyị nwere ngwaọrụ MEMS abụọ nwere kagbuo mkpọtụ cVc (kwa site na Qualcomm) yana uche nke 100 db SPL na 1 kHz.
Anyị nwere n'ime ikpe ahụ na batrị nke naanị 500 mAh nakwa na ọ ga-akwụ ụgwọ na 5V site na eriri USB-C gụnyere, ọ bụghị ihe nkwụnye ọkụ. Nke a ga - achọ ihe dị ka nkeji 120 nke ụgwọ zuru ezu site na 0% gaa na 100%.
Qualitydị ọdịyo: Nyocha anyị
You hụla ọtụtụ ọnụọgụ nke na - agwa gị ihe ọ bụla belụsọ ma ịnwere ụfọdụ ihe ọmụma, yabụ ka anyị gaa nyocha anyị, gịnị bụ ahụmịhe anyị na - eji ha, ọkachasị na ebe a anyị anwalela ihe niile elu ọgwụgwụ TWS ekweisi dị na ahịa.
Dị ala: N'ikwu eziokwu, mgbe ekweisi nwere obere protagonists, anyị na-echekarị ngwaahịa azụmaahịa chọrọ ikpuchi adịghị ike ndị ọzọ. Nke a abụghị ikpe na Melomania Touch, ọ bụ ihe ị ga-atụ anya ịtụle na ha bụ ngwaahịa Cambridge Audio. Agbanyeghị, eziokwu ahụ na ha esiteghị na bass a ma ama apụtaghị na ha enweghị ike ile anya n'ụzọ ahụ, anyị ga-ekwu maka nke a ma emechaa. Bass bụ ebe ọ kwesịrị ịdị ma na-enye anyị ohere ige ntị na ọdịnaya ndị ọzọ. O doro anya, ọ bụrụ na ị na-eche ị ofa ntị naanị reggaeton azụmaahịa, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ngwaahịa gị.
Mgbasa ozi: Dị ka ọ na-adị, a na-eji obere eze nwaanyị, uwe mwụda na nnụnnụ mmiri anwale ule nke owu. Igweisi ole na ole nwere ike iduhie egwu a ma anyị ahụ ọdịiche dị iche nke akụrụngwa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị enweghị ọghọm dị mma, anyị enweghị ọgba aghara na a na-anụ olu ndị a nke ọma. Emere ule anyị site na Huawei P40 Pro na aptX na iPhone site na AAC.
Ngwa Melomania, uru agbakwunyere
Anyị anwalela ngwa ahụ Melomania na beta na-adọ. Ihe si na ya pụta bụ ngwa, ngwa ahụ ga-enyere anyị niile aka. Nwere ike ịchọta ngwa maka iOS na gam akporo (n'oge a na-ede ya, ọ kabatabeghị).
Mepụta profaịlụ omenala
Mee ọ rụọ ọrụ / kwụsị ọrụ mmetụ
Gbanwee nha anya
Kwado / gbanyụọ ọnọdụ nghọta
O doro anya ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ike ịnweta mmelite (abụọ ka anyị na-anwale ha) yana karịa ihe niile iji hazie ogo ọdịyo na ekweisi nke ọkwa a, bravo ka Cambridge Audio.
Anyị na-amalite site na nnwere onwe, Oge 50 zuru ezu ma ọ bụrụ na anyị echebara ihe ruru 9 awa na-aga n'ihu (naanị site na profaịlụ A2DP) na ndị fọdụrụ 41 nyere site na igbe. Nke bụ eziokwu bụ na anyị na-enweta ihe dịka awa asaa nke ụda na-aga n'ihu na ogo dị elu yana ọnọdụ enweghị nghọta agbanyụrụ, gburugburu 7/35 awa na mkpokọta na nnukwu mpịakọta.
Na iji ogologo oge ha dị mma, mỌbụna ma ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ Transparency Mode, nke ahụ ga-enweta ụda dịka mkpu ma ọ bụ olu site na igwe okwu iji mụta ha n'ụzọ doro anya, ọ bụkwa na ịbụ ekweisi na ntị na njide pụrụ iche, anyị nwere nhichapụ ọdịyo dị mma iji nwee ọ enjoyụ na egwu yana na Ọnọdụ Nghọta nwere ike ịdị mkpa.
Ahụm m na Melomania Touch dị ezigbo mma, anyị na-echekwa ngwaahịa ngwaahịa Cambridge Audio ọzọ, nke a gosipụtara na ọnụahịa ya, site na euro 139 Nwere ike ịzụta ha abụọ na ya ukara website na site na EGO A.
Ihe na: 1 de enero de 2021
Mgbanwe ikpeazụ: December 23 nke 2020
Ihe eji eme ihe na imewe, na adi obi nma
A elu ụda àgwà
Nhazi site na ngwa gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Melomania Touch, ọmarịcha ekweisi si Cambridge Audio
Egwuregwu kacha mma maka PC